लोकसेवामा यसरी मौलिक उत्तर लेखेर मात्र सफल हुन सकिन्छ, शाखा अधिकृतको यस्तो छ अनुभब
सुमन भट्टराई बैसाख ३१, 2076
तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–३ मा जन्मिएँ । नोट्रेडेम उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एलकेजीबाट सुरु भएको विद्यालय शिक्षा डुम्रेस्थित पवित्रा माविबाट समापन गरेँ । एलकेजीदेखि कक्षा १० सम्मको अवधिमा कहिल्यै तृतीय भएको अनुभव गर्नुपरेन ।
सायद त्यही कारण कहिल्यै म कमजोर छु भन्ने हीन भावना पलाउन दिइनँ । लाग्छ, यही आत्मबल नै मेरो जीवनभरका लागि शक्तिको स्रोत हो । विद्यालयमा आयोजना हुने हाजिरी जवाफ, निबन्ध प्रतियोगितालगायत रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धामा प्रायः पुरस्कार जितेकै हुन्थेँ ।
लेखन र सिर्जनात्मक क्रियाकलापको भोकले परिवारको असन्तुष्टिका बाबजुद पनि एसएलसी परीक्षापछि आमसञ्चार र पत्रकारिताको औपचारिक अध्ययन सुुरु गरेँ ।
जुँगाको रेखी नबस्दै सुरु भएको लेखनको भोक मेट्न अध्ययनसँगै पत्रकारिताको अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिइरहेँ । तर, २०७० देखि पत्रकारिता पेसा त्याग्दै निजामती सेवामा छु ।
पत्रकारिता पेसा अँगाल्नुअघिसम्म मैले आइडल मानेको व्यक्तित्वहरूलाई पेसामै प्रवेश गरेर भोगेपछि धारणा नकारात्मक बन्न थाल्यो । पेसाकै विकल्प खोज्दै थिएँ । पेसागत स्थायित्व, सुनिश्चित वृत्तिपथ, र देशभित्रै सम्मानित जीवनको मार्ग खोजिरहेको थिएँ ।
आफ्नो मनस्थितिमा बुनिने कतिपय काल्पनिक योजनालाई सरकारको नीति र योजना निर्माणमा जोडेर हेर्थें, तर तादात्म्यता नपाउँदा अघोरै खिन्नता लाग्थ्यो । सोच्थेँ, मेरो सोच मेरै टाउकोभित्र मात्रै छ । कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ मै पुग्नुपर्छ । र, त्यहाँ पुग्ने मार्ग भनेको एक मात्रै निष्पक्ष र पवित्र लोकसेवा आयोग मात्रै हो ।
परिभाषा घोक्नु समयको बर्बादी
मैले लोकसेवा परीक्षा दिने मनस्थिति बनाउनुअघि नै लोकसेवा तयारीमा लागेर लगातार असफल भइरहेकाहरू देख्थेँ । उनीहरूको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा कहिले काहीँ फ्रस्टेसन आउँथ्यो । रातोदिनको घोटाइ, मोबाइल स्विचअफ, सारा सामाजिक सम्बन्धबाट पर ।
हैट कुरै नगरौँ । हुलका हुल ट्युसन पढ्न गएको देख्दा आफू मात्रै पछि परेको हो कि भन्ने पनि लाग्थ्यो । अनि म पनि त्यही भिडमा कुदेँ । एक हप्तापछि ट्युसनबाट पनि अघाएँ । अनि सुरु भयो, टुप्पीकसाइ । साथीहरूबाट इन्स्टिच्युटका ह्यान्डआउट्स माग्थेँ ।
बजारमा निस्किएका किताब पनि थुपाारेँ । इन्टरनेटमा रातभर झुमियो र बजारमा आएका सोपान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलगायत सबैमा कम्तीमा एकसरो आँखा लगाइयो ।
तर, जे–जति धस्सिए पनि आफ्नै मौलिक तयारी गर्न नसक्ने हो भने कपी काट्नेको निधार खुम्चिनुबाहेक केही हुनेवाला छैन भन्ने दिव्य सोच जब्बर बनेर बसिरह्यो । अध्ययनका सिलसिलामा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि त्यसको अवधारणागत विकासको जानकारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने लाग्छ ।
अवधारणा राम्ररी बुझ्न सकियो भने धेरै कुरा आफैँ पनि लेख्न सकिन्छ । लामालामा परिभाषा घोक्नु समयको बर्बादी मात्रै हो । अवधारणागत विकासलाई समात्दै त्यसलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर अध्ययन गर्ने हो भने प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने लाग्छ ।
विषयवस्तुसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति, तथ्यांक लगायतलाई याद गर्नु आवश्यक छ । छोटा, व्यावहारिक उदाहरण पनि टुच्च मिसाउँदा फाइदै होला ।
विषयवस्तुबारे केही सान्दर्भिक भनाइबाट सुुरुवात र अन्त्य गर्न मेसो पाइयो भने जवाफ आकर्षक पो बन्छ कि । जसरी लेखौँ, तर कपी परीक्षण गर्नेको आँखालाई सकेसम्म आफूतिर खिच्न प्रयास गरौँ ।
पेसागत जीवनको आजसम्मको पाँच वर्षे दौरानमा स्थानीय तहदेखि, प्रदेश र संघ गरी तिनै तहको अनुभव गरेँ । एकात्मक शासनको कारिन्दादेखि संघात्मक संरचना स्थापनामा स्वयं सहभागी हुने अवसर पनि जुर्याे ।
इतिहासको यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनलेु सायद भाग्यमानी पुस्तामा पर्छु । स्थानीय तह स्थापनाका अप्ठ्यारा—सप्ठ्यारा अब मेरा स्मृतिका सम्पत्ति हुन् ।
दूरदराजका गाउँमा लेखापाल र कार्यकारी अधिकृत गरी दुईजना कर्मचारीको टाउकोमा आइपरेको जिम्मेवारी इमान र क्षमताले भ्याएसम्म पार लगाइयो ।
स्थानीय तह मात्रै होइन, प्रदेश सरकार स्थापनामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको अनुभवले भन्न सक्छु, उमेर, अनुभव र पद मात्रै पनि सबैथोक होइन रहेछ ।
सचिव र सहसचिवको नेतृत्वमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारभन्दा भर्खर सेवा प्रवेश गरेका शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा स्थापना भएको स्थानीय तह धेरै प्रभावकारी बनेको छ ।
बजेट, तालिम र आवश्यक निर्देशनको अभावमै भए पनि युवा जोस र इच्छाशक्तिको भरमा नै स्थानीय सरकारको गोरेटो खोल्ने ऊर्जाशील भ्याङगार्डुहरू सम्मानका पात्र हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा ठुलो संख्यामा शाखाअधिकृतहरुको सरुवा (नामावली सहित)
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले व्यापक रुपमा शाखा अधिकृतहरुको सरुवा गरेको छ । ...
माध्यामिक तहका शिक्षकको पदस्थापना को–कहाँ हेर्नुहोस नामावलीसहित)
काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका माध्यमिक तहका शिक...
शिक्षक लाईसेन्सको तयारी गरिरहेका सबैले जान्नैपर्ने केही कुरा
काठमाडौँ । शिक्षकको पेसागत विकासले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ...
पदस्थापना भएको जिल्ला छनोटमा चित्त नबुझेमा के गर्ने ?
भक्तपुर । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका माध्यमिक तहका शिक्...
आफ्ना मान्छे विस्थापित हुन नदिन र सरुवामा लाखौँ रकमको चलखेल गर्न रिक्त दरबन्दी लुकाइयो
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा मागे भन्दा बढी ...
लोकसेवाको ‘प्रथम पत्रको तयारीमा हुनुहुन्छ याद गर्नुहोस्, ‘कि’ नम्बरमा पनि तपाई झुक्किन सक्नुहुन्छ्
काठमाण्डौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा करिब ४ लाख भन्दा बढि परि...
झ्याल नजिकै यौनसम्पर्क गरिरहेको एक जोडी उत्तेजित हुँदा नवौँ तलाबाट खस्यो
काठमाडौं । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको एक भवनको नवौं तल्लामा आत्मीय क्षण बिताइरहेको एक जोडी भु...
शिक्षक सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना
आफैले छोरीलाई बलात्कार गर्दा बनाएको भिडियो श्रीमतीको हातमा परेपछि...
शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाईसेन्स)को तयारी गरिरहेका सबैले जान्नैपर्ने यस्तो छ विषय
लोकसेवाको प्रश्नपत्र च्यातियो, चार जना पक्राउ
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? डाक्टर यस्तो भन्छन्
निम्न माध्यामिक तहको परीक्षासम्बन्धी आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना (सुचनासहित)
शिक्षिकाले ट्युसन पढ्ने १९ वर्षीया विद्यार्थीसँग यौनसम्पर्क गर्दा गर्दाै श्रीमानले भेटाएपछि हत्या
राजधानीका कुन–कुन ठाउँमा कसरी हुँदैछ यौनधन्दा ,यी हुन राजधानीका नामुद सेक्स स्टेशन
शिक्षक लाइसेन्सको परिक्षा अन्योलमा